रोए प्रचण्ड,धुर्मुसले आत्माहत्या गर्ने सक्छ,प्रेम बानियाँको यस्तो खुलासा कांग्रेस महाधिवेशन को को नेता उठे ?आजका मुख्य मुख्य समाचार हेर्नुहोस
एक जमनाका चर्चित पत्रकार प्रेम बाँनियाले नेपाल आएका बखत कलाकारिता हुँदै अहिले फाउण्डेसन चलाइरहेका सिताराम कट्टेल धुर्मुस सँग भेटघाट गरेका छन् ।”
“हाल अमेरिका बस्दै आएका बानिँया अहिले नेपाल आएका छन्। नेपाल बसाइका क्रममा धुर्मुस सँग भेटघाट गरेका बानियाँले उनी सँग भेटघाट गरे पछि केहि गम्भिर सवालहरु उठाएका छन् । क्रिकेट रंगशाला बनाउँन नसकेर बसेका धुर्मस निकै विक्षिप्त भएको बानिँयाले भनेका छन् ।”
“धुर्मुस फ्रस्टेसनमा गइसकेको खुलासका बानियाले गरेका छन् । पारिवारिक रुपमा पनि निकै तनावपुर्ण अवस्थामा उनि पुगेका भन्दै बाँनियाले धुर्मुले आत्म हत् या नै गर्न सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । धुर्मुस यो अवस्थामा पुग्नु पर्ने उसको के अपराध हो ? भनेर बाँनियाले प्रश्न सोधेका छन् ।”
“धुर्मुसलाई भेटेको तस्बिर आफ्नो सामाजिक संजालमा सेयर गर्दै प्रेम बाँनियाले यस्तो लेखेका छन् धुर्मुसले आत्महत्या गर्यो भने के हुन्छ ? दुरूत्साहनको मुद्दा कसलाई लाग्छ ?
“देसनिमित्त केही गर्छु भन्यो, भूईंचालोले तहसनहस पारेका केही वस्ती बनायो अनि देसलाई क्रिकेट रंगसाला दिन्छु भनेर त्यो अभियान थाल्यो । १७ करोड ऋन छ अहिले १ फाउण्डेशन ऋन तिर्न नसकेर ‘ब्ल्याकलिस्ट’ पर्दैछ ! धुर्मुस आफै बिचलित देखें! परिवारमा उस्तै तनाब ! छँदाखाँदाको कलाकारिता उसै अलपत्र पर्यो !”